Naadiga Barcelona oo caqabad heysata waa halkee qabadda? » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Champions League/Naadiga Barcelona oo caqabad heysata waa halkee qabadda?
LAACIB.SO : Naadiga Barcelona FC waxay guul weyn ka gaartay kooxda Valencia kulan ka tirsana horyaalka Spain ee La Liga todobaadkii 28-aad kulankaas oo ka dhacay Garoonka Camp Nou oo ay leedahay Naadiga Barcelona.
Guushii ay gaartay Barcelona Goolal ay dhaliyeen Messi 2, Suarez iyo Gomez ayaa Barcelona ka caawiyay in ay gaarto guul raaxo leh iskana masaxdo guuldaradii todobaadkii hore ka soo gaartay kooxda Diportivo La Coruña.
Barcelona Shaxda ay ku ciyaarto:3-4-3:
Shaxdan ayaa kooxda Barcelona ku keenaysa dhibaato aan yarayn oo dhanka difaaca ah taas oo kulankii xalay iyo labadii kulan ee PSG iyo Deportivo laga dareemayay dhibaatada, Barcelona ayaa si xoogan ugu dhibaatoonaysa hadii ay shaxda ku sii ciyaarto maadama xiddigaha weerarka ka ciyaara ayna awood u helayn in ay dib u soo raacaan kubada marka iyaga laga soo qaato.
Weeraryahanada Khadka dhexe ayaa xitaa marka ay weerar tagaan ee lagu soo qaado kubad rogaal celis ah awood u waayay in ay si deg-deg ah u soo gaaraan si ay u caawiyaan daafacyada.